June 2017 - BuzzFeed Myanmar
ညစ်ညမ်းပုံတွေ ရှိတယ်ဆိုပြီး မှားယွင်းစွပ်စွဲခံရလို့ မိမိကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံ
အသက် 50 အရွယ် ကလေးနှစ်ယောက်ဖခင် Sean O’Kane အမည်ရ အမျိုးသားဟာ ၎င်းရဲ့ နောက်ဆုံး သေကြောင်း
ကြံမှတ်စုထဲမှာ သေကြောင်းကြံစည်ရခြင်း အကြောင်းအရင်းကို ရှင်းပြထားပါတယ်။ သူဟာ ဇနီးရဲ့လက်ကိုင်အိတ်ထဲက ပစ္စတိုကိုယူကာ မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်ပစ်ခတ်ပြီး သေကြောင်းကြံစည်ခဲ့တာပါ။
သူငယ်ချင်းနဲ့ ရှုတင်မှာဆုံလို့ ပျော်နေတဲ့ သက်မွန်မြင့်
သရုပ်ဆောင် သက်မွန်မြင့်ကတော့ လက်ရှိမှာ အနုပညာအလုပ်တွေ ပြန်လုပ်နေပါပြီ။ ယခုလည်း ကြော်ငြာတစ်ခု ရိုက်ကူး နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီကြော်ငြာရိုက်ကူးမှာတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ နေတိုးနဲ့ ပြန်ဆုံတာ ဖြစ်လို့ ပျော်နေပါတယ်။ သူမရဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ နေတိုးနဲ့တူ ရိုက်ကူးနေတဲ့ ရှုတင်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်း တင်ထားပါသေးတယ်။
ငါး တွေတော့ သေပြီ လူတွေ သေဖို့ ပဲ ကျန်တော့တယ်
ဒါတွေကတော့ ဝမ်ပေါင်ရဲ့ WCP ကန်ထဲက ငါးတွေသေနေတာပါ WCP ဆိုတာ water collection pond မိုးရေစုေ ဆာင်းတဲ့ကန်ပါ အောက် ခံဘာမှခင်းမထားတဲ့ ရိုးရိုးရေစုဆောင်းကန်ပါ။
ဒါပေမယ့် ကြေးနီစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင် အက်ဆစ်ယိုစိမ့် နေမှုတွေကြောင့် ဒီကန်ထဲမှာ အက်ဆစ်ပါဝင်နေပြီး ငါးတွေ သေတာပါ ။
င်္Fb ပေါ်တွင်ဝေဖန်မှု့များနေတဲ့ ” Taxi သမားက မော်တော်ပီကယ်ကို ဝိုင်းရိုက်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်
Taxi သမားက မော်တော်ပီကယ်ကို ဝိုင်းရိုက်နေကြတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင် တစ်ခုပါ ။ Fb ပေါ်တွင် တစ်ညအတွင်း post ရှဲသူ နှစ်သောင်းသွားတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပြီး လူမှုကွန်ယက်တွင် ဝေဖန်မှုများနေပါသည်။ ( အောက် ဆုံးတွင် ဗီဒီယိုဖိုင်တွဲတင် ပေးထားပါသည်။
စည်းမျဉ်းတင်းကျပ်မှုအားနည်းတဲ့ငွေချေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုတွေ မြင့်တက်လာ ချိန်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့ ငွေထုတ်ချေးသူတွေကို တရုတ်အစိုးရက စတင် ဖြိုခွင်းနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဘေဂျင်းအစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားလွှာတစ်ခုထဲမှာ ကျောင်းသားတွေ ငွေချေးယူ အောင် ဆွဲဆောင်တဲ့လုပ်ရပ်အားလုံးကိုရပ်တန့်ကြဖို့ ငွေထုတ်ချေးသူတွေကို ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ သည်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာ ကိုယ်လုံးတီးဆယ်ဖီပုံတွေကို အပေါင်ခံပစ္စည်းအနေနဲ့ တောင်းယူတာအပါအဝင် အဆမတန်အတိုးနှုန်းရယူတာတွေနဲ့ မနှစ်မြို့ဖွယ်လုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ်လာပြီးနောက် အခုလိုမျိုး ညွှန်ကြားချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ အချင်းချင်း ငွေချေးတဲ့စနစ်ဟာ လတ်တလောနှစ်ပိုင်းအတွင်း တရုတ်မှာခေတ်စားလာ ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ “wang dai” လို့သိကြတဲ့ သူစိမ်းတွေက အခြားသူတွေကို ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့ ဖုန်းအပလီကေးရှင်းတွေကနေတဆင့် အသေးစားချေးငွေတွေထောက်ပံ့ပေးနေတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝလုံခြုံရေးအာဏာပိုင်တွေက ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန် လိုက်တယ်လို့ သောကြာနေ့ ကျန်းရှိပြည်နယ်အစိုးရက သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ အဆမတန်အတိုးနှုန်းရယူပြီး ငွေချေးငှားနေတာတွေနဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဘေးကင်းရေးကို ဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အပြုအမူတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းတဲ့ […]
၀ိန်းရွန်းနီပြောသွားတဲ့ သူနဲ့ကစားပုံ ဆင်တူသူအကြောင်း
ဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ ကစားပုံဆင်တူတဲ့ ကစားသမားတွေ ရှိစမြဲပါ။ တွန်တွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ ကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားတွေ၊ လှပညက်ညောတဲ့ အလိမ်အခေါက်တွေနဲ့ ကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားတွေ၊ တစ်ကွင်းလုံး ပြေးလွှားပြီး ကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားတွေ၊ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် လူချကစားတတ်တဲ့ ကစားသမားတွေ စသဖြင့် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
သင့် ဇနီး ဆိုတာ ….!
ကျွန်တော်တို့အားလုံး အိုရမဲ့လူတွေကြီးကြီးပါ။ ခုမအိုသေးပေမဲ့ ဖတ်ထားရင် ကိုယ့်အတွက် ကာကွယ်ဖို့ ပြင်ဆင်ချိန်ရသလို၊
ကိုယ့် မိဘတွေအတွက် ဆန်းစစ် ဆင်ခြင်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။ အကြံလည်းပေးလို့ရတာပေါ့၊ အိုလာရင် ဘာတွေပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ၊ ဘာသာရေး ရူ့ ဒေါင့်ကနေမဟုတ်ပဲ လက်တွေ့ ဘ၀ရူ့တောင့်ကနေ ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်….
Wonder Woman ရိုက်ကူးဖို့ အနုပညာကြေး မဖြစ်စလောက်သာရခဲ့တဲ့ ဂဲလ်ဂဒေါ့
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကပြသခဲ့တဲ့ Man of Steel ဇာတ်ကားက မပေါက်ခဲ့သော်လည်း Superman မင်းသား ဟင်နရီကဗီးလ်ဟာ အနုပညာကြေး ဒေါ်လာ ၁၄ သန်း ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ လက်ရှိမှာ ဒေါ်လာ သန်း ၆၀၀ ခန့် ဝင်ငွေရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ Wonder Woman ရဲ့အဓိကသရုပ်ဆောင် ဂဲလ်ဂဒေါ့ရဲ့အနုပညာကြေးကတော့ ဟင်နရီကဗီးလ်နဲ့ မယှဉ်သာလောက်အောင် နည်းပါးနေခဲ့ပါတယ်။